Qalabka loogu talagalay qorayaasha iyo qorayaasha shaashadda | Laga soo bilaabo Linux
Qalabka loogu talagalay qorayaasha iyo qorayaasha shaashadda
In kasta oo inta badan qorayaasha laylisku bilaabaan inay wax qoraan iyagoo adeegsanaya tifaftiraha qoraalka guud, sida kan Qoraa de LibreOffice, waxaa jira barnaamijyo kala duwan oo fududeeya hawsha qor dukumiinti dheer, haddii kani yahay novela, a qoraal, a buuggan ama xitaa a Dhismaha Qoraal waxaad qorto, waxaad ka heli kartaa barnaamijyo sida kuwa hoos ku xusan aalado aad u faa'iido badan oo si gaar ah diiradda loo saarayo qoraalka ama abaabulka qaab dhismeedka shaqadaada.
1 Buugga SHEEKADA
Madal: Windows iyo Linux
Luqad: Luqado badan
Sharaxaad: Buugga sheekada "Abaabul Novel-kaaga" waxaa lagu sharaxay inuu yahay barnaamij il furan oo loogu talagalay qorista riwaayadda qorayaasha, qorayaasha, iyo hal-abuurka. Barnaamijku wuxuu kuu oggolaanayaa inaad abaabusho qorshaha shaqadaada iyo astaamaheeda oo dhan.
sudo apt-get rakib buug sheeko
Soo Degso Buugga Sheekada
Madal: Mac, Windows, Linux
Sharaxaad: Inta badan waxaa diiradda la saaray soo saaridda dhammaan noocyada dukumiintiyada ee loogu talagalay abuurista maqalka (qoraallada, sheekooyinka sheekooyinka, iwm.), Waxaa loo isticmaali karaa qorista qoraallada filimada, riwaayadaha, raadiyaha iyo majaajillada. Qalab aad u awood badan.
sudo apt-get rakibi celtx
Soo Degso Celtx
Madal: Windows, Linux
Sharaxaad: Dhawaan la cusbooneysiiyay, waxay diiradda saareysaa qorista sheekooyinka waxayna u oggolaaneysaa maareynta cutubka, qeexidda astaamaha ... iwm
Sharaxaad: Waxay la mid tahay Buugga Sheekada ama qoraaga.
sudo apt-get rakib kabikaboo
Sharaxaad: Gabi ahaanba xulasho yar. Ikhtiyaarrada saxda ah si qoraagu si gaar ah diiradda u saaro qoraalka, kuna dhex jiro naqshad aad u yar.
sudo apt-get rakib buugaagta
Madal: Luqado badan.
Sharaxaad: Ma oggola in la abaabulo sheeko-curis, laakiin waxay baabi'ineysaa wax kasta oo ka weecin kara qoraaga, si loogu oggolaado inuu si gaar ah diiradda u saaro qoraalka.
Sharaxaad: Sida Q10 oo kale, ma oggolaanayso abaabulka sheeko-xariir, laakiin waxay baabi'ineysaa mashquulinta.
sudo apt-hel rakibida qolka madow
Waxaa jira barnaamijyo kale oo loogu talagalay qorayaasha iyo in loo fududeeyo hawshooda hal-abuurka ah, sida Scrivener (loogu talagalay Mac) ama Ulysses (sidoo kale loogu talagalay Mac) aad uga awood badan kuwii hore, laakiin ma ahan lacag la'aan.
Qoraa ahaan, ma isticmaashaa qalabka noocan ah? Ma ogtahay ama isticmaashaa wax aan ka ahayn tifaftireyaasha qoraalka? Ma isticmaashay mid ka mid ah kuwa la magacaabay? Sidee khibradaadu ugu saabsanayd? Waxaan aad u xiiseynayaa fikradaada.
Wadada buuxda ee maqaalka: Laga soo bilaabo Linux » Isticmaal FileLet » Qalabka loogu talagalay qorayaasha iyo qorayaasha shaashadda
David Crespo Ramirez dijo
Bookwrite kuma sii jirto keydka Ubuntu 12 ...
Jawaab David Crespo Ramírez
Waan ka xumahay, laakiin xiriiriyehaagii u dambeeyay ee Ubuntu, oo ka socda qolka mugdiga ah, kuma saabsana ereyga ereyga ee waa barnaamij loogu talagalay sawirrada ... wali waxaan raadinayaa beddelkii Q10 ee Ubuntu.
Francis Mirantra dijo
Barnaamij cusub oo wali kujira beta laakiin aad ufiican waa Plume Creator. Halkan waa iskuxirka http://sourceforge.net/projects/plume-creator/
Jawaab Francisco Mirantra
celtx waa qumman yahay, aad bey u xun tahay sidaa darteed waa xaddidan tahay: Waxaan u fududahay inaan u isticmaalo nooca daaqadaha guusha, marka loo eego midka loo qorsheeyey Linux
Waa macquul. Horena waa maqaal hore. Si kastaba ha noqotee, waxay sii wadaa inay u adeegto inay kobciso xiisaha mawduuca. Sidoo kale, waxay noqon kartaa inay ku daraan nooca cusub meelaha lagu keydiyo waqti kasta. Dhanka kale waxay u adeegtaa kuwa aan cusbooneysiin Ubuntu.
Farxad! Wuu dhaafay.
kyle, in kasta oo ay taasi ku lug leedahay ogaanshaha LaTEX
Jawaab Enrique Zetina
marka la rakibayo qolka mugdiga ah wuxuu ku shaqeeyaa barnaamijka tifaftirka sawirka, taasi sax ma tahay?
Jawaab Paco Rosales
Ciise Guerra Martin dijo
si aan wax u qoro adoon ku mashquulin Waxaan isticmaalaa darkcopy, uma baahnid inaad wax rakibo maxaa yeelay waa codsi shabakadeed: http://darkcopy.com/
Jawaab Jesús Guerra Martín
Ma garanayo sida barnaamij u dalban karo qisada sheeko iyo astaamaheeda, waa inuu noqdaa mid xiise leh. Kiiskeyga, waqti ka hor waxaan isku dayay LyX (Qt) inaan sameeyo dukumiintiyo kala duwan, waa tifaftire kuu ogolaanaya inaad dhinac iska dhigto qaabdhismeedka inaad diirada saarto waxa ku jira, waxay daryeeshaa inta hartay: qaabab u dhig cinwaannada, indent tuducyada, iwm iwm Waxaa laga abuuri karaa buug-yare yar yar illaa shaqooyin waaweyn. Waan ka helay
StoryBook kuma jirto meelaha wax lagu keydiyo, ugu yaraan Ubuntu, maahan Debian ...
Hab fudud oo lagu ogaan karo waa iyadoo la adeegsanayo xiriiriyeyaasha magacyada xirmada. 🙂
Haddii ay dhacdo in aysan muuqan, adoo adeegsanaya pkgs.org.
Lito madow dijo
Waqtiga aan jecelahay waa FocusWrite kaas oo lagu rakibay ppa. Waxay iga caawisaa inaan diirada saaro. Waa la isku habeyn karaa muuqaalkeeda. Si aan u qaabeeyo waxaan u qaadaa .txt-ka waxaanan u qaadaa Qor. Laakiin Qor waa kaliya haddii ay tahay inaad ku daabacdo warqad.
Jawaab Negro Lito
Xiiso leh! Mahadsanid!
RF Yáñez dijo
Waxaan ku soo gaadhay qoraalkan Twitter RT. Had iyo jeer way fiicantahay in lagu taliyo softiweer caawiya qofkasta oo daneynaya inuu fariisto oo wax qoro, maaddaama aad na weydiisatid ra'yigeena, waa kan ujeedkeygu
Waxaan xasuustaa isticmaalka buugga sheekada mararka qaar, laakiin deegaankiisa - nooca unugyada midabbada leh - ayaa ku dhammaaday aniga wareer. Iyadoo YWriter aan la kulmay wax la mid ah. Xusuus gaar ah Q10 iyo Darkroom oo, qaabkooda awgood, aan loo isticmaalin wax kale oo aan ahayn qoris (miyaanay ahayn waxa aan ku doonaynno barnaamijyada sidan oo kale ah?). Aad u habboon.
Si kastaba ha noqotee, waxaan jeclaan lahaa inaan kugula taliyo laba barnaamij (oo la bixiyo, in kasta oo ay ku jiraan noocyadooda bilaashka ah. FIIRO GAAR AH: tan macnaheedu maaha inay ku siinayaan oo keliya muddada tijaabada ee caanka ah iyo tan gaaban) Midka hore wuxuu raacaa waddo aad ugu eg Q10 iyo Darkroom, magaceedu waa Ommwriter. Farqiga u dhexeeya ayaa ah in deegaankoodu noqdo, soo jiidasho - laga yaabee hypnotic - casuumaad in la qoro. Way ku qurux badan tahay lafteeda iyo gadaalba, xasilloonida iyo muusiggeeda quruxda badan (David Ummmo) ayaa ka dhigaya waxtar sixir ah.
Horaanba ugu dhaqaaqeyna softiweer ay leedahay jawi ay ka caawiso wax kasta oo aan ka fekeri karno inaan ku dhammeyno sheeko, taasi waa Liquid Story Binder XE Silsiladda xulashooyinka waa mid aan la koobi karin, laakiin barnaamijku wuu fududaan karaa haddii uu u baahan yahay qorshe howleed u gaar ah. Mid ka mid ah xulashooyinka wanaagsan ee aad haysato, tusaale ahaan, ayaa ah inaad ogaan karto haddii aad ku celceliso eray ama weedh aad u badan cutub ama cutub dhan. Kani wax badan buu caawiyaa, maxaa yeelay sidan ayaa tiraabtu u noqonayn sidii maraq aan dhammeyn kareyso. Qodob kale oo weyn oo lagu daray (laga yaabee inay ku jirto barnaamijyada lagu sheegay boostadan) ayaa ah inaad abuuri karto "yool u hoggaansamid", sida qorista kun eray maalintiiba muddo saddex bilood ah. LSB ayaa ina tusi doonta horumarkayaga.
Waa inaan u qaataa in markaan dhammeeyo qoraalka aan jeclahay inaan arko isagoo ku dhexjiray ereyga processor. Xaaladdayda, waxaan isticmaalaa LibreOffice iyo Word.
Ugu dambeyntii, waxaan kugu martiqaadayaa barteyda shaqsiyeed:
Iyo sidoo kale boggaga suugaanta naxdinta leh ee aan dhawaan la furay asxaabta qaar:
Ku jawaab RF Yáñez
Ayaa yaqaan Scribus? http://www.scribus.net/canvas/Scribus
Ku jawaab luisfuertes
Waa hagaag waaw ... waa la igula taliyay ... Waxaan rakibay yWriter5 laakiin waxay umuuqataa wax badan sida barnaamijkeyga xisaabinta. : - /
Ku soo jawaab Psicalipsis
Iguma cadda shabakadda haddii Celtx uu yahay summad qaybisa barnaamijyo kala duwan ama ay tahay barnaamij loogu talagalay qorista hal-abuurka; ama haddii ay lacag la’aan tahay ama la bixinayo. Waxay u muuqataa inaad iska diiwaangelisay si aad u tijaabiso ...: - /
Qoraalku waa qabow, laakiin waxaa loogu talagalay in si cad oo adag loo dhigo, oo aan loo "qorin" qoraalka boorsada. 😀
Iyo sidee ku saabsan LaTeX?
Jawaab Osvaldo Martin
Waxaan u isticmaalaa 'lyx', dhammaadka hore ee LaTex. Waxay ku habboon tahay abuuritaanka cutubyada si gooni gooni ah ka dibna loo abuuro feyl master ah oo aad wax walba ku xidhi karto, adigoo awood u leh inaad tixraacdo dhammaan cutubyada. Waxay ku habboon tahay sheekooyinka, sheekooyinka, iwm.
Ku jawaab hluisgarcia
Kala firidhsan dijo
Waad ilaawday inaad sheegto saaxiibka Focus Writer, qaabka qolka madow, laakiin waxaa lagu abuuray QT ee Linux Aniga ahaan waxay iiga fiican tahay Qolka Madow.
mmmm daawashada qaar ka mid ah barnaamijyada la soo bandhigay Waxaan ka fikiri karaa habka ugu yar ee wax loo qoro:
Fur terminalka, waxaad dhigtaa taariikh madow (haddii aysan ahayn), xarafka cagaaran (wuxuu u muuqdaa mid wanaagsan: P) ka dibna shaashad buuxda, geli: ~ $ nano
Oo diyaar u ah in wax la qoro iyada oo aan la jeedin: D. Maxay kula tahay XD aniga ayey igu soo dhacday markaan arkay bogga http://darkcopy.com/ maxaad u isticmaali websaydh markaad isticmaali karto terminalka 😀
Ku jawaab tuke
Wanaagsan !!! Mahadsanid!!! in la sameeyo qoraalka haha: p
Sidaas oo kale! Ama qor buuga xiga, yaa og ...
Google Docs-ka ayaa ah kaabista xafiiska otomaatiga ee Linux?
Dhammaadka taageerada Debian Lenny